Xumuura Galmee Barruu Saaguu
Faayilii Barruu Saaguuf
Qaree galmee keessaa bakka faayilii itti saaguu barbaaddu oolchi.
Saagi - Faayilii filadhu.
Galmee barruu isa saaguudhaaf barbaaddu agarsiissiitii, kana booda Tole cuqaasi.
Qabeentootii galmee barruu, galmee ammaatti dabalaman, yoo maddii fayyilii jijjiiramee, hinhaaroman. Yoo barbaaddee, yammuu ati galmee maddaa jijjiirtu qabeentootnii akka ofumaan haaromuuf, faayilii akka geessituutti saagi.
Galmee Barruu Xumuura akka Geessituu tokkotti saaguu
Sanduuqa Kutaa Haaraa maqaa barreessiitii, kana booda saanduqa filannoo Geessituu fili.
Sanduuqa File Name keessatti maqaa faayilii isa saaguudhaaf barbaadduu barreessi, ykn qabduu sakattaa (...) cuqaasiitii faayilicha agarsiissi.
Yoo galmeen barruu galtee qabaate, kutaa isa sanduuqa Kutaalee keessatti saaguudhaaf barbaadduu filachuu nidandeessa.
Yoo barbaaddee, kutaadhaaf dirqalawwan dhangii qindeessi.
Yoomuu, yammuu galmeen maddaa jijjiiramuu, LibreOfficen ofumaan qabeentoota kutaa saagamee haarmsa. hujeekaan qabeemtoota kutaa haarmsuuf, Meeshaalee - Haaromsi - Mara Haaromsi filadhu.
Title is: Xumuura Galmee Barruu Saaguu